IHuawei P30 kunye neP30 Pro: Iinkcukacha, amaxabiso kunye nokwazisa ngokusesikweni | I-Androidsis
Njengoko kuqinisekisiwe kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, Uluhlu lweHuawei P30 luzisiwe ngokusemthethweni namhlanje ngoMatshi 26 eParis. Kwezi veki bekukho amarhe amaninzi malunga nesi siphelo sitsha sophawu lwaseTshayina. Inxalenye yokubalulwa kwayo ibivuza, ethi kuvunyelwe ukuba nombono ocacileyo ngaphezu kokulindela. Okokugqibela, sele zinikezelwe.
Kuba iHuawei P30 kunye neP30 Pro zisemthethweni. Isiphelo esitsha esitsha sophawu lwesiTshayina, esizinikezele kuyilo oluhlaziyiweyo, kunye nokuqwalaselwa ngokukodwa kwiikhamera, apho uphawu lubekwe khona njengomlinganiso kweli candelo. Ezimbini eziphezulu zoluhlu inkampani efuna ukubetha ngalo itafile.
Siza kuthetha nawe apha ngezantsi kwifowuni nganye kwezi zimbini. Siqala ngokubonisa iinkcukacha nganye nganye, ukuze ufumane umbono. Emva koko, siza kukuxelela ngakumbi malunga nabo, kunye notshintsho oluninzi olwenziwe yinkampani kolu luhlu lweeHuawei P30s. Yintoni esinokuyilindela kubo?
I-Huawei Yonwabela i-9s kunye neNwabele i-9e: Uluhlu oluphakathi kwinqanaba elitsha lophawu lwaseTshayina
1 Ukucaciswa kweHuawei P30
1.1 IHuawei P30: Inkqubela phambili ephezulu
2 Ukucaciswa kweHuawei P30 Pro
2.1 IHuawei P30 Pro: Ukufota njengokugxilwe kuko
2.2 Iprosesa, i-RAM, ukugcinwa kunye nebhetri
Ukucaciswa kweHuawei P30
Siqala kuqala ngemodeli enika igama layo kwesi siphelo sophawu lwesiTshayina. I-smartphone esemgangathweni, apho sibona khona utshintsho loyilo olwenziwe kuyo. Njengoko isebenzisa inotshi encinci ekubunjweni kwethontsi lamanzi, inobulumko ngakumbi, engalawuliyo isikrini. Ukongeza, le Huawei P30 izinikele ekunciphiseni iifreyimu zescreen ukuya kuthi ga. Okuvumela ukuba uthathe ithuba elingaphambili.
Ngasemva sinekhamera kathathu kwisixhobo. Ukongeza, isivamvo somnwe somnwe sidityaniswe kwiscreen sesixhobo. Ezi zezi Ukucaciswa ngokupheleleyo kweHuawei P30:
Ukucaciswa kobuchwephesha beHuawei P30
Inkqubo yokusebenza I-Android 9.0 Pie ene-EMUI 9.1 njengomaleko
Isikrini I-6.1-intshi ye-OLED enesisombululo esipheleleyo se-HD se-2.340 x 1.080 pixels kunye ne-19.5: 9 ratio
Inkqubo Kirin 980
GPU I-ARM Mali-G76 MP10
Ukugcinwa kwangaphakathi 128 GB
Ikhamera esemva I-MP ye-40 enokuvula f / 1.6 + 16 MP nge-f / 2.2 + 8 MP nge-f / 3.4
Ikhamera yangaphambili MP engama-32 ene-f / 2.0 ukuvula
Conectividad I-Dolby Atmos i-Bluetooth 5.0 jack 3.5 mm i-USB-C i-WiFi 802.11 a / c IP53 GPS i-GLONASS
Ezinye izinto Inzwa yeminwe edityanisiweyo kwiscreen seNFC yokuvula ubuso
Ibhetri I-3.650 mAh ene-SuperCharge
Ubukhulu X x 71.36 149.1 7.57 mm
Ixabiso 749 euro
Singaphezulu kwako konke okuphezulu kuluhlu, Ecacisa inkqubela phambili yokuba nolu luhlu kule minyaka. Ukuba sele kulo nyaka uphelileyo bekukho umtsi omkhulu kumgangatho, othe waguqulela kwintengiso elungileyo. Into ethi uphawu lufuna ukuyiphinda kulo nyaka ngeemodeli ezintsha, ngale Huawei P30 e-helm.
Uyilo olulungileyo, ii-specs ezilungileyo, kunye nophuculo oluninzi, esiza kukuxelela ngaphezulu apha ngezantsi, ukuze ukwazi ukuba loluphi uluhlu oluphakamileyo oluza kusishiya nalo.
I-Huawei Nova 4e: I-brand entsha ye-brand mid-range ye-brand
IHuawei P30: Inkqubela phambili ephezulu
Kwelinye icala, siyabona ukuba uphawu lwesiTshayina luyaqhelana nemarike ngokwendlela yoyilo. Basishiya nenotshi enobulumko ngakumbi, elawula ngaphezulu iscreen sefowuni. Ukongeza kwizakhelo ezincinci kakhulu, ezivumela ukusetyenziswa okungcono ngaphambili kweso sixhobo. Ngasemva, kwenziwe ngeglasi, sifumana ezi khamera zintathu zingasemva.
Iikhamera ngokungathandabuzekiyo ziindawo ezomeleleyo kolu phawu luphawu oluhlaziyiweyo. Sinokuyibona kule Huawei P30, eyazisa iisenzi ezintathu ezahlukeneyo. Inzwa nganye isebenza ngenjongo, kwaye yile indibaniselwano evumela abasebenzisi ukuba bathathe iifoto ezisemgangathweni ngawo onke amaxesha ngesiphelo esiphakamileyo. Ukongeza, ubukrelekrele bokufakelwa banoxanduva lokuphucula ezi khamera, ngaphambili. Kwikhamera yangaphambili sikwanokuvulwa kobuso kwesixhobo. Inzwa yeminwe yeminwe ifakwe phantsi kwescreen, njengoko kulindelwe iinyanga.
Isixhobo sifika kunye Ubungakanani bebhetri ye-3.650 mAh, ekwahlawulisa ngokukhawuleza. Ngokudibeneyo neKirin 980 kunye ne-Android Pie, sinokulindela ukuzimela okukhulu kuyo. Ikwafika ngolona hlobo lwamva nje lweshishini laseTshayina, i-EMUI 9.1 ngokwendalo.
Ukucaciswa kweHuawei P30 Pro
Kwindawo yesibini sifumana ifowuni ekhokelela kwesi siphelo sophawu lwesiTshayina. I-smartphone esemgangathweni, enamandla kunye neenkcukacha ezifanelekileyo. Ngokuphathelele kuyilo, IHuawei P30 Pro ikwasebenzisa inotshi encinci emile njengokuhla kwamanzi Kwisikrini. Inotshi enobulumko ngakumbi, ekuvumela ukuba uthathe ithuba elingaphambili kwisixhobo. Emuva sinee-sensors ezine, iikhamera ezintathu kunye ne-TOF sensor, indibaniselwano edlula iikhamera zobungcali.
Eminye, iHuawei P30 Pro iba yiyo Eyona fowuni siyifumana kwikhathalogu Kwintengiso. Le yinkcazo epheleleyo yesixhobo:
Ukucaciswa kobuchwephesha beHuawei P30 Pro
Umzekelo P30 Pro
Isikrini I-6.47-intshi ye-OLED enesisombululo esipheleleyo se-HD se-2.340 x 1.080 pixels kunye ne-19.5: 9 ratio
i-ram 8 GB
Ukugcinwa kwangaphakathi I-128/256/512 GB (iyandiswa nge-MicroSD)
Ikhamera esemva I-MP ye-40 yokuvula i-f / 1.6 + i-20 MP ye-engile ebanzi engu-120ert ngomngxuma f / 2.2 + 8 MP nge-f / 3.4 + Huawei TOF Sensor
Conectividad IDolby Atmos iBluetooth 5.0 jack 3.5 mm USB-C WiFi 802.11 a / c iGPS GLONASS IP68
Ibhetri I-4.200 mAh ene-SuperCharge 40W
Ubukhulu X x 158 73.4 8.41 mm
U bunzima I-192 gram
Ixabiso 949 euro
Ukongeza kuyilo olutsha, iHuawei P30 Pro ikwabalaselisa imibala emitsha. Kwakuyiminyaka edlulileyo xa i-brand yazisa imibala ye-gradient, Esikhe sayibona kamva kwiifowuni ezininzi kwikhathalogu yayo, ukongeza ekubeni "ikhuthazekile" kwezinye iimveliso ezininzi kwi-Android. Kwimodeli yalo nyaka sinemibala emitsha, eyile:
I-Pearl emhlophe (elingisa ithoni yeeperile)
Ukuphuma kwelanga (umphumo wegradient phakathi kweorenji kunye neetoni ezibomvu)
I-Aurora (elingisa imibala yeeLanga zaseMantla, enemibala phakathi kohlaza okwesibhakabhaka nohlaza)
Ukuphefumla kweCristal (iithoni eziluhlaza eziphefumlelwe ngamanzi eCaribbean)
Ukukhethwa kwezona zinto zinomdla, ezibizelwe ukoyisa abasebenzisi ngolu khetho. Nangona uyilo ayisiyiyo kuphela into etshintshileyo kwesi siphelo sitsha sophawu. Kuba sikwafumana iindaba ezininzi emnxebeni, ethi yenze iflegi entsha yohlobo, kwinyanga enye emva kwe umboniso weMate X.
IHuawei P30 Pro: Ukufota njengokugxilwe kuko
Ngaphandle kwamathandabuzo, iikhamera sesona sixhobo sikhulu sale Huawei P30 Pro.Ibhrendi yaseTshayina isebenzisa indibaniselwano yeenzwa ezine kwifowuni. Sinendawo yokuqala Inzwa ephambili ye-40 MP ene-f / 1.6 ukuvula Kwaye kuza nefilitha yeRGB ehlelwe ngokutsha. Imifuno yefilitha ye-RGB iguqulwe ngeetoni ezityheli, ukuze ibe nemvakalelo enkulu ekukhanyeni, kwinqanaba lekhamera eqeqeshiweyo. Inzwa yesibini yindawo engama-20 ye-MP ebanzi engama-120º kunye neferture f / 2.2 kunye neyesithathu, enye yezinto ezimangalisayo.
Ukusukela iHuawei yazisa ngenzwa ye-8 MP ngokuvula f / 3.4, isikwere, kuba kuyo sine-5x zoom yokusondela. Kukusondeza okumangalisayo, okuvumela ukusondeza okubonakalayo okungama-10x, ukusondeza kwe-5x hybrid kunye ne-50x zoom yedijithali, ngaphandle kokulahleka komgangatho. Into ebizelwe ukuguqula intengiso. Kunye nayo sinenzwa ye-TOF, ejolise ekuqondeni ukusebenza kwekhamera, kwaye sikwazi ukusebenzisa uphuculo. Kungenxa yoko le nto sinobukrelekrele bokuzenzela kuyo.
Iikhamera zale Huawei P30 Pro ziinguqu kwimarike. Basebenzisa i-AIS, evumela uzinzo olwahlukileyo lwemifanekiso, kunye nemowudi yasebusuku ebekwe njengeyona intle kwintengiso. I-AI HDR + ikwaziswa kwezi khamera. Ngombulelo kule teknoloji, ukukhanya kunokuqondwa ngexesha lokwenyani, ukuvumela ukukhanya ukuba kubuyekezwe xa kukho imfuneko. Into ebalulekileyo ekusebenzeni kwayo kuzo zonke iintlobo zeemeko.
Ekugqibeleni, Zombini i-OIS kunye ne-AIS ziye zaziswa kwiividiyo. Ukuze iividiyo zizinze maxa onke, nokuba urekhoda ividiyo ebusuku. Okuvumela umgangatho ophezulu kuzo zonke iintlobo zeemeko. Kwikhamera yangaphambili, kusetyenziswe i-MP eyi-32 ene-f / 2.0, apho sinokuvula khona ebusweni.
Iprosesa, i-RAM, ukugcinwa kunye nebhetri
Kwiprosesa, I-Kirin 980 ikhethiweyo ngophawu njengengqondo yale Huawei P30 Pro. Iprosesa yaziswa kunyaka ophelileyo Yeyona nto inamandla esinayo kuluhlu lophawu. Ukongeza, sifumanisa ubukho bobukrelekrele bokufakelwa kuyo. Inayo neyunithi yokusebenza ethile yoku.
Ngokubhekisele kwi-RAM, Sifumana ukhetho olunye lwe-8 GB ye-RAM, nangona sinokugcina okuninzi. Abasebenzisi baya kuba nakho ukukhetha phakathi kwe-128, 256 kunye ne-512 GB yokugcina yangaphakathi. Yonke indibaniselwano inokubanokwandiswa kwendawo echaziweyo, ke amandla okugcina awazukuba yingxaki kuye nawuphi na umsebenzisi.
Kwibhetri, njengoko kuye kwaxelwa, amandla alo andisiwe. Le Huawei P30 Pro inayo Ubungakanani bebhetri ye-4.200 mAh. Ukongeza, sifumana i-40W SuperCharge ngokukhawuleza kuyo. Ndiyabulela kule ntlawulo, i-70% yebhetri inokuhlawuliswa kwimizuzu engama-30 kuphela. Sikwanokutshaja ngaphandle kwamacingo kuwo.
Njengenkqubo yokusebenza sele iza nePie ye-Android ngokwendalo. Kunye nale nguqulo, sine-EMUI 9.1 njengobume bokwenza ngokwezifiso. Ngokudityaniswa neprosesa, kunye nemisebenzi yolawulo lwebhetri ye-Android Pie, ukuzimela akuyi kuba yingxaki kuluhlu oluphezulu. Enye into ebalulekileyo.
IHuawei P Smart + 2019: Uluhlu oluphakathi lwegama elitsha
Nje ukuba iinkcukacha zeefowuni ezimbini zaziwe, kufuneka sazi kuphela ukuba ziya kuphehlelelwa nini ezivenkileni, ukongeza kumaxabiso abaya kuba nawo kuhlobo lwabo ngalunye. Nangona kule meko, Sifumana uhlobo olunye kwimeko yemodeli elula .
Kwimeko ye-Huawei P30, sinomdibaniso omnye we-6/128 GB. Ixabiso lale fowuni kwimarike yaseSpain ngama-euro angama-749, njengoko bekunokwenzeka ukwazi ukubulela kukuvuza kwangaphambili, kuba uCarrefour ubeke iifowuni kwintengiso ngaphambi kwexesha. Isungulwe ngemibala eyahlukeneyo, njengoko besele bephawulile ngelo xesha, njengabamnyama, iAurora okanye iBreathing Crystal. Abathengi baya kuba nakho ukukhetha umbala abawufunayo. Imibala emihlanu iyonke, kwiimodeli ezimbini.
Ngakolunye uhlangothi, iHuawei P30 Pro ifika neendibaniselwano ezahlukeneyo I-8/128 GB, 8/256 kunye ne-8/512 GB. Ke abathengi baya kuba nakho ukukhetha ngokusekwe kulowo bacinga ukuba kufanelekile kubo. Kwimeko yakho, amaxabiso ngala:
Inguqulelo ene-8/128 GB iya kumaxabiso kwi-euro ezingama-949
I-Huawei P30 Pro ene-8/256 GB iza nexabiso le-1049 euro
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IHuawei P30 kunye neP30 Pro: Isiphelo esiphakamileyo sihlaziyiwe